Bit By Bit - Mass ပူးပေါင်း - 5.2.3 နိဂုံး
လူ့တွက်ချက်မှုစီမံကိန်းများကိုအလွယ်တကူကွန်ပျူတာများအားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းလွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်-ကြီးတွေ-စကေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့အများကြီး Non-ကျွမ်းကျင်သူများ၏လုပျငနျးပေါင်းစပ်။ သူတို့ကအထူးပြုကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲလူအားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်ရိုးရှင်းတဲ့ Micro-အလုပ်များကိုစာရေးသို့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကိုချိုးဖျက်ဖို့ split-လျှောက်ထား-ပေါင်းစပ်ဗျူဟာကိုသုံးပါ။ ဒုတိယမျိုးဆက်လူ့တွက်ချက်မှုစနစ်များလည်းလူ့အားထုတ်မှုများကိုချဲ့ထွင်နိုင်ရန်အတွက်စက်သင်ယူမှုကိုအသုံးပြုပါ။
လူမှုရေးသုတေသနတွင်, လူ့တွက်ချက်မှုစီမံကိန်းများကိုသုတေသနပညာရှင်များကခွဲခြားချင်ဘယ်မှာအခြေအနေများ, code ကို, ဒါမှမဟုတ်တံဆိပ်ပုံများ, ဗီဒီယို, သို့မဟုတ်ကျမ်းမှာအသုံးပြုခံရဖို့အများဆုံးများပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအမျိုးအစားခွဲခြားမှုအဆုံးသတ်မဟုတ်, သူတို့သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်ကုန်ကြမ်းဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်နိုင်ငံရေး, စာတမ်းတွင်၏လူအစုအဝေး-နိုင်တဲ့ coding ရွှေ့ပြောင်းဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဒိုင်းနမစ်အကြောင်းကိုသီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဇယား 5.1 လူ့တွက်ချက်မှုလူမှုရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့ပုံနောက်ထပ်ဥပမာပေးစွမ်းသည်။ ဒီစားပွဲက Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့်မတူဘဲ, များစွာသောအခြားလူ့တွက်ချက်မှုစီမံကိန်းများ (ဥပမာ, အမေဇုံစက်မှု Turk) Micro-task ကိုအလုပ်သမားစျေးကွက်ကိုသုံးကြောင်းပြသထားတယ်။ ငါသည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းစီမံကိန်းကိုဖန်တီးခြင်းအကြောင်းအကွံဉာဏျပေးတဲ့အခါငါပါဝင်သူလှုံ့ဆျောမှု၏ဤကိစ္စကိုမှပြန်လာကြပါလိမ့်မယ်။
စားပွဲတင် 5.1: လူမှုရေးသုတေသနတွင်လူ့တွက်ချက်မှုစီမံကိန်းများ၏ဥပမာများ။
ပါတီကြေညာစာတမ်း coding စာသားမ Micro-task ကိုလုပ်သားစျေးကွက် Benoit et al. (2015)
200 ကိုအမေရိကန်မြို့ကြီးတွေမှာအ Occupy ဆန္ဒပြအပေါ်သတင်းဆောင်းပါးတွေထဲကနေထုတ်ယူအဖြစ်အပျက်သတင်းအချက်အလက် စာသားမ Micro-task ကိုလုပ်သားစျေးကွက် Adams (2014)
သတင်းစာဆောင်းပါးခွဲခြား စာသားမ Micro-task ကိုလုပ်သားစျေးကွက် Budak, Goel, and Rao (2016)
ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းစစ်သားဒိုငျယာရီမှအဖြစ်အပျက်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည် 1 စာသားမ စေတနာ့ဝန်ထမ်း Grayson (2016)
မြေပုံအပြောင်းအလဲများ detect ပုံရိပ်တွေ Micro-task ကိုလုပ်သားစျေးကွက် Soeller et al. (2016)